Baarlamaanka Britain oo markale diiday meelmarinta qorshaha R.W Theresa May. - NorSom News
Baarlamaanka Britain oo markale diiday meelmarinta qorshaha R.W Theresa May.
Xildhibaannada Britain ayaa mar kale cod aqlabiyad ah kgaa soo horjeedsaday qorshihii ugu dambeeyay ee dawlada ay Hogaamiso Theresa May ay in dalweynaha Ingiriisku uu uga baxo Midawga Yurub.
Ra’iisulwasaare Theresa May ayaa xaqiijisay in Baarlamaanku ay Arbacada u codayn doonaan in dalka uu Midawga Yurub ka boxo isaga oo oon wax heshiis ah la galin Midawga Yurub. Haddii ay qorshahaas meel marin waayaana ay xildhibaannadu Khamiista u codayn doonaan in dib loo dhigo qorshaha ka bixitaanka Midawga Yurub.
R.W May oo khubad ayaa ka hor jeedinaysay baarlamaanka ku sheegtay in ay aad uga carootay natiijada codbixinta baarlamaanka, iyada oo wajigeeda laga dheehan karo niyadjabka ay la kulantay mark sadexaad.
Arintan ayaa kusoo aadeyso xili isbuucyo oo qur ah ay ka dhimanyihiin xiligii loo qabtay in U.K ay kaga baxdo EU-da, xiligaas oo ku eg dhamaadka bishan Maarso ee sanadkan. U.K ayaa hadii ay heshiis la´aan kaga baxdo EU-da wajihi doonto degenaansho la´aan ganacsi, mid dhaqaale iyo siyaasadeedba.
Xigasho/kilde: BBC-LAANTA-AFKA SOOMAALIGA
Previous articleWarqad furan: Maka mid tahay 1600 soomaalida ah ee UDI-du jawaabta degenaanshaha kala daahday?
Next articleXiliga uu shaqeeyo baasaboorka Norway oo 5 sano noqon karo.